Exodus 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yehowa hyɛɛ Mose den (1-7)
Aaron poma dan ɔwɔ kɛse (8-13)
Ɔhaw 1: nsu dan mogya (14-25)
7 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Hwɛ, mayɛ wo sɛ Onyankopɔn* ama Farao, na wo ara wo nua Aaron na ɔbɛyɛ wo diyifo.+ 2 Nea maka akyerɛ wo nyinaa, ka kyerɛ wo nua Aaron na ɔno nso nka nkyerɛ Farao, na ɔbɛma Israelfo no afi n’asaase so akɔ. 3 Nanso mɛma kwan ama Farao koma apirim,+ na mɛyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwonwade bebree wɔ Egypt asaase so.+ 4 Ne nyinaa akyi, Farao rentie mo, na mɛteɛ me nsa wɔ Egypt so, na mede asotwe* akɛse beyi me dɔm,* Israelfo a wɔyɛ me nkurɔfo no afi Egypt asaase so.+ 5 Afei sɛ mede me nsa ka Egypt na miyi Israelfo no fi wɔn mu a, ɛno na Egyptfo behu paa sɛ mene Yehowa.”+ 6 Ɛnna Mose ne Aaron kɔyɛɛ nea Yehowa kae sɛ wɔnyɛ no. Wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. 7 Bere a wɔne Farao kɔkasae no, na Mose adi mfe 80, na na Aaron nso adi mfe 83.+ 8 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: 9 “Sɛ Farao ka sɛ, ‘Monyɛ anwonwade’ a, ka kyerɛ Aaron sɛ, ‘Tow wo poma no to Farao anim.’ Ɛbɛdan ɔwɔ kɛse.”+ 10 Enti Mose ne Aaron kɔɔ Farao anim, na wɔyɛɛ nea Yehowa kae sɛ wɔnyɛ no pɛpɛɛpɛ. Aaron tow ne poma no too Farao ne n’ahemfi mpanyimfo anim, na ɛdan ɔwɔ kɛse. 11 Na Farao nso frɛfrɛɛ anyansafo ne asumanfo no bae, na Egypt akɔmfo+ no nso de wɔn asumansɛm yɛɛ saa ara.+ 12 Wɔn mu biara tow ne poma too fam na ebiara dan ɔwɔ kɛse, na Aaron poma no memenee wɔn mpoma no. 13 Nanso Farao kɔɔ so ara pirim ne koma,+ na sɛnea na Yehowa aka no, wantie wɔn. 14 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Farao koma yɛ den.+ Ɔmpɛ sɛ ɔma nkurɔfo no kɔ. 15 Kɔ Farao nkyɛn anɔpa. Hwɛ! Ɔbɛkɔ nsu no ho. Enti kohyia no wɔ Asubɔnten Nil no ho; worekɔ a, fa poma a ɛdan ɔwɔ no kura.+ 16 Ka kyerɛ no sɛ, ‘Hebrifo Nyankopɔn Yehowa na wasoma me wo nkyɛn,+ na waka sɛ: “Ma me nkurɔfo no nkɔsom me wɔ sare so,” nanso ebesi nnɛ wuntiei. 17 Nea Yehowa aka ni: “Eyi na ɛbɛma woahu sɛ mene Yehowa.+ Mede poma a ekura me yi rebɛbɔ Asubɔnten Nil mu na ɛbɛdan mogya. 18 Na Nil mu mpataa bewuwu ama nsu no abɔn kankaankan, na Egyptfo rentumi nnom Nil mu nsu.”’” 19 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ka kyerɛ Aaron sɛ, ‘Fa wo poma na teɛ wo nsa kyerɛ Egypt nsu so,+ wɔn nsubɔnten, asuasu,* atare,+ ne wɔn nsu a ɛtaataa hɔ nyinaa so, na ɛnnan mogya.’ Na mogya bɛba Egypt asaase so baabiara, nneɛma a wɔde nsu gu mu a wɔde nnua ayɛ, ne nea wɔde abo ayɛ nyinaa mu.” 20 Nea Yehowa kae sɛ Mose ne Aaron nyɛ no, saa na wɔyɛe; wɔyɛɛ no ntɛm ara. Ɔmaa ne poma so de bɔɔ nsu a ɛwɔ Asubɔnten Nil mu no mu wɔ Farao ne ne nkoa anim, na asubɔnten no mu nsu nyinaa dan mogya.+ 21 Afei mpataa a ɛwɔ asubɔnten no mu wuwui,+ na asubɔnten no bɔnee. Enti Egyptfo no antumi annom Nil mu nsu,+ na mogya baa Egypt asaase so baabiara. 22 Egypt akɔmfo no nso de nyankomade yɛɛ saa ara,+ enti Farao kɔɔ so pirim ne koma, na sɛnea na Yehowa aka no, wantie wɔn.+ 23 Afei Farao san kɔɔ ne fi, na wamfa nea asi yi nso anyɛ asɛm. 24 Na Egyptfo nyinaa fii ase tutuu mmura wɔ Nil ho baabiara de pɛɛ nsu a wɔbɛnom, efisɛ na wontumi nnom Nil mu nsu. 25 Bere a Yehowa maa Nil dan mogya no, nnanson twaam.
^ Nt., “mayɛ wo Onyankopɔn.”
^ Nt., “atemmu.”
^ Nt., “m’asafo.”
^ Kyerɛ sɛ, Nil asuasu.